Esory ny tavy amin'ny fampidirana ravina bay sy kanelina | Nutri Diet
Fampidirana ravina bay sy kanelina
PaÃ¼ Heidemeyer | | fahasalamana, fanampin-tsakafo
Androany dia mahita safidy maro isika hanome antsika an'io fanerena fanampiny io raha ny fahaverezan'ny tavy, ny habetsany ary ny lanjany. Ho an'ny anio dia entinay ianao fitambarana mampanantena handoro tavy miaraka amin'ny fampidirana ravina bay sy kanelina, zava-pisotro izay mpiara-miasa tonga lafatra amin'ny sakafontsika.
Ity fampidirana laurel ity manana fananana mandoro tavy mahaliana beAnkoatr'izay, manamora ny fandevonan-kanina sy ny fivezivezin'ny tsinay izany amin'ny alàlan'ny fampihenana ny lanjan'ny sakafo sy ny asidra amin'ny sakafo.
Ity fisotroana ity voaomana amin'ny fomba tena tsotra izy ioNy antony bebe kokoa hanandramana azy ary haka izany mandritra ny herinandro maro hahitana ny tombony azo avy aminy. Etsy ankilany, tsy misy fialan-tsiny ara-toekarena satria lafo daholo ny akora ilaina rehetra.
1 Ahoana ny fomba fanomanana ny fampidirana laurel sy kanelina
2 Mety ve ny mandoro tavy?
3 Entina vavony foana ve?
4 Moa ve ny fampidirana ny kanelina sy ny ravina bay dia mampihena ny lanjany haingana?
5 Vokatry ny dite kanelina sy laurel
5.1 Contra ny kanelina
5.2 Contrautations Laurel
5.3 Contraindications ny kanelina sy laurel dite
6 Fananana laurel hampihena lanja
7 Fananana kanelina hanary lanja
Ahoana ny fomba fanomanana ny fampidirana laurel sy kanelina
Ireto ambany ireto dia mitanisa ireo akora ilaina mba hanomanana ny fampidirana laurel sy kanelina:
Litera misy rano mineraly
Ravina bay dimy
Ny lojika sy ny intuition dia tsy hahomby, fa tsy maintsy entintsika mangotraka fotsiny ireo singa telo ary hiala andrahoina mandritra ny 15 minitraVantany vao lasa ny fotoana dia vonoinay ny hafanana ary avelao izy hiala sasatra sy hangatsiaka kely amin'izay vonona hisotro.
Araka ny hitanao dia tsotra be izy io ary koa, vita amin'ny iray litatra laurel, ny vola ilaina isan'andro isan'andro mandritra ny andro.
Na ahoana na ahoana, raha tianao izany manao infusion bebe kokoa, mila fotsiny isika avo roa heny ny fangaro rehetra. Mora.
Mety ve ny mandoro tavy?
Ity fampidirana laurel ity dia tsy fomba fahandro fahagagana, na iza na iza mandray azy dia tsy hanomboka hamoy tavy eo noho eo, mba hahatratrarana azy dia mila ezaka ara-batana ianao, sakafo tsara ary faharetana sy finiavana be hahatratrarana ny tanjona napetraka.
Na izany aza, ity dite ity dia mety fanampiana fanampiny hanampy anao amin'ny ady amin'ny lanjany be loatra, fomba matsiro hitazomana sy hanohizana ny fihenan-danja. Toy izany koa no ahafahantsika misafidy fanafody sy famenon-tsakafo hanina handoroana tavy, azontsika atao koa ny mihinana ity tsindrona ity izay manafaingana ny metabolisma ary manampy ny tsinaintsika hamoaka fako.
Fanjifana ny ity fisotroana kanelina sy bay ity dia mampanantena fa hampihena 8 santimetatra amin'ny herinandro fitsaboana. Mety ho fatiantoka be dia be io mandritra ny andro vitsivitsy, tsy manam-paharoa ny vatana sy ny zavamiaina tsirairay, na izany aza, tsy misy very ny fanandramana, raha toa ka miaraka amin'ny fanatanjahan-tena sy ny sakafo voalanjalanja.
Entina vavony foana ve?
Ity fampidirana ity tsara kokoa raha raisina amin'ny vavony foanaToy ny ankamaroan'ny zava-pisotro "fahagagana" dia tsara kokoa ny mitondra azy ireo amin'ny maripana an-trano ary na dia mafana noho ny hatsiaka aza, satria io fomba io dia afaka mamoaka tsara ny otrikaina ao anaty tsinay ary amin'ny vavony foana mba tsy hisy hanelingelina izany. mitroka.
Tokony ho lanina isan'andro izany esory ny tavy sy ny volume. Raha te-hahatsikaritra ny mahasoa azy isika ary mahatsapa ny fiovana rehetra dia mila misotro farafaharatsiny isika 3 kaopy isan'andro, ny iray alohan'ny sakafo maraina, ny iray alohan'ny sakafo atoandro ary ny farany alohan'ny hatory.
Raha tsy sarotra aminao ny mandray azy ary mankafy ny tsirony, azonao atao ny mandray azy tontolo andro, alaharo ny fomba fahandro araka ny efa nolazainay ary raiso isaky ny irinao. Mariho fa afaka mihetsika toy ny diuretic noho izany dia hanana faniriana bebe kokoa ianao amin'ny famoahana mandritra ny andro.
Antony dimy hanoloana siramamy ny kanelina
Moa ve ny fampidirana ny kanelina sy ny ravina bay dia mampihena ny lanjany haingana?
Betsaka ny olona nanandrana azy no nilaza fa mety ho very santimetatra maro ianao amin'izay misy tavy bebe kokoa ao anatin'ny fotoana fohy. Izany dia vokatry ny fananana tsara izay manana ireo akora roa lehibe, hiresaka momba azy ireo isika avy eo.
Araka ny efa noresahintsika dia tsy maintsy mazava ny tanjontsika momba ny vatantsika. Ny olona tsirairay dia manana metabolisma, fahazarana misakafo ary fomba fiaina mavitrika na miadana kokoa. Ireo lafin-javatra rehetra ireo dia misy fiatraikany mivantana amin'ny lanjantsika, koa ampio ity fampidirana laurel ity amin'ny sakafontsika ho an'ny olona sasany dia afaka manampy azy ireo hihena haingana kokoa noho ny hafa. Ny fomba tsotra indrindra hialana amin'ny fisalasalanao dia ny fividianana ravin-bay bay sy hazokely kanelina betsaka ary manomboka manandrana.
Azonao atao ny mampiasa kanelina sy ravina bay tsy misy ranoNa dia aleony aza mandany azy amin'ny ravina bay vaovao sy ny hazo kanelina, satria misy fofona tsara kokoa.
Vokatry ny dite kanelina sy laurel
Toy ny amin'ny ankamaroan'ny tranga tsy mahasalama ny fanararaotana na oviana na oviana sakafo na oviana na oviana mandritra ny fotoana maharitra satria ny vatana dia mety hijaly amin'ny famamoana, midera sy manoro hevitra foana ny fihinanana antonony ny fanafody rehetra ao an-trano izahay.
Sady mahasalama ity tsindrona ravina kanelina sy bay ity tsy maintsy manana antonony isika Rehefa mandany azy, ny singa tsirairay dia samy manana ny fanoherana azy raha mandany azy mandritra ny fotoana maharitra isika.
Contra ny kanelina
Mety hiaritra fanovana ny hoditrao, mety ho mena sy mivonto izy io.
Mety hijaly ny sasany fihetseham-po alohan`ny.
Avelao mahita tory, satria manentana ny fananana sasany amin'ny kanelina.
mamontsina tenda, lela ary molotra maivana.
Aretin-kibo, aretim-po sy reflux.
Mahasosotra ny arom-bavony, afaka mijaly amin'ny gastritis na manimba fery.
Manjifa laurel be dia be miasa loatra ny aty, satria natokana hanafoanana ireo fitsipika mavitrika amin'ny sakafo izany fa raha ampijalina dia ho mamo ny zavamananaina.
Contraindications ny kanelina sy laurel dite
Manoro hevitra anao ny manatona ny dokotera momba ny fianakaviana ary manome hevitra momba ny fikasana hihinana an'ity fampidirana kanelina sy laurel ity satria mety hisy fiatraikany amin'ny lafiny maro ny fahasalamantsika.
Tsinay mora tezitra
Ankizy latsaky ny 12 taona.
Mora vay ny olona.
Fananana laurel hampihena lanja
Ireto ny sasany amin'ireo fananana laurel izay hanampy antsika hihena:
Manafoana ny fandraisana rano.
hahamaivana ny fahorian'ny marary ny hozatra sy ny tsy fahazoana aina iraisana.
Mpanara-dalàna tonga lafatra.
Mitazona fandevonan-kanina tsara, sorohy ny fandevonan-kanina mavesatra.
Misy vokany anti-bakteria, antiseptika ary anti-inflammatoire.
Mety amin'ny fitsaboana malefaka pharyngitis, gripa, na bronchitis.
Izany dia zavamaniry diuretic ary manampy tsemboka.
Ahenao ny adin-tsaina sy fanahiana.
Fananana kanelina hanary lanja
ny fananan'ny kanelina maro izy ireo ary iray amin'ireo mpiara-miasa amin'ny fihenan'ny lanjany. manana
Manafaingana ny fifohana otrikaina.
Miady amin'ny fitohanana.
Sorohy ny fivontosan'ny kibo ary manala ny etona.
Mampihena ny metabolisma.
Noho ny fofony sy ny tsirony dia mampihena ny fahazotoan-komana.
Manentana ny asan'ny voa ary ario ny rano.
Araka ny hitanao, ny ravina bay sy kanelina dia singa roa matanjaka izay afaka manampy anao amin'ny ady amin'ny lanjany be loatra izy ireo, fanampiana kely tsy manimba raha tsy fanararaotana. Omano ity fampidirana havozo kanelina sy helodrano matsiro ity ary ento isaky ny afaka manao izany, aleo amin'ny vavony foana sy alohan'ny sakafo lehibe. Araho miaraka amin'ny sakafo mahasalama izany, tsy misy tavy sy be loatra ary aza misalasala manao fanatanjahan-tena ara-batana farafahakeliny intelo isan-kerinandro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Fampidirana ravina bay sy kanelina
35 hevitra, avelao ny anao
Mizaha toetra azy aho .. Amin'izao fotoana izao dia tsikaritro fa mankany amin'ny trano fidiovana aho! Manantena valiny aho !!
Aza atsahatra ny fakana azy raha raisinao amin'ny vavony foana sy antsasak'adiny alohan'ny hatory dia ho hitanao ny valiny !!!!!!
Valiny tamin'i Mar
yasna dia hoy izy:
1 herinandro no nisotroako azy tamin'ny vavony foana ary andro iray na hafa dia sotroiko ho rano mangetaheta izany. Ary tena tsara ny fitsidihako ny trano fidiovana. Miandrasa ary jereo ny valin'ny fihenan-danja
Mamaly an'i yasna
Gierlthay MF dia hoy izy:
Amin'ny vavony foana no ahazoana azy ... mafana na mangatsiaka ary mandra-pahoviana no maka azy ary miala sasatra amin'ny fandraisana ... omeo ahy ny angona avy amin'ny fis
Valiny tamin'i Gierlthay MF
Edith dia hoy izy:
Te hahafantatra aho raha misy contraindication amin'ny tiroida izay ananako hypothyroidism ary mandray Euthyrox aho
Mamaly an'i Edith
Marco dia hoy izy:
Mafana ihany no anaovana azy ary isan'andro tsy maintsy ataonao indray. Misaotra tamin'ny valinteninao.
Mamaly an'i marco
Sonia Palacios dia hoy izy:
HO AN'NY OLONA MANANA HYPOTHYROIDISME SY MITADY NY THYROID MEDICATION dia afaka mitondra azy mitovy.
Valiny tamin'i Sonia Palacios
egliceph gonzalez dia hoy izy:
Mamaly an'i egliceph gonzalez
Sandra dia hoy izy:
Impiry isan'andro no azo alaina?… .Mahaka ve izy io aorian'ny sakafo, sa mialoha? .. misaotra
Mamaly an'i sandra
Lily dia hoy izy:
Tsy manana gallbladder aho ary voan'ny gastritis. Azoko atao ve ???
Mamaly an'i Lily
Salama maraina tiako ho fantatra hoe hafiriana ny fakana azy, impiry isan'andro, dia azo tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana.
Valiny tamin'i Alexander
Angela dia hoy izy:
Nanomboka androany aho ary ny tena marina dia mahaliana ao anatin'ny herinandro dia ho hitako ny valiny ary lazaiko aminao fa mafana fifadian-kanina iray kapoaka isan'andro aho fa handray antoandro koa
Mamaly an'i Angela
Roxy dia hoy izy:
Salama, raha nanompo anao io, nihena ve ianao?
Valiny amin'i Roxy
Ary inona no nitranga?
Yurema dia hoy izy:
Salama maraina, afaka mandray azy ny olona voan'ny tosidra
Mamaly an'i Yurema
Salama, salama, azon'ny olona voan'ny tosidra ambony mandray azy
fitsiriritana dia hoy izy:
Salama, hafiriana ny faharetany?
Medardo Miranda dia hoy izy:
Mandeha tsara aho ary mamiravira betsaka, manantena aho fa hanao toy izany koa ianao
Mamaly an'i Medardo miranda
maria elena dia hoy izy:
Maharitra hafiriana izany?
Mamaly an'i maria elelena
corina dia hoy izy:
Mandra-pahoviana no azo tehirizina ny dite?
Valiny tamin'i Corina
Zully Irasema dia hoy izy:
Manontany tena aho raha afaka mitondra azy ireo izay manana aretina toy ny tiroid na ny hafa, hitako fa nisy ny nanontany fa tsy misy tompon'andraikitra manome valiny.
Valiny tamin'i Zully Irasema
Daisy dia hoy izy:
Hanomboka rahampitso aho mahantra hoe firy ny fotoana laniny ary firy ny fotoana ialany ao anaty vata fampangatsiahana ary tiako ho fantatra izany ka toa mahamay izy na mangatsiaka mahantra fa
Valiny tamin'i Daisy
Alejandra dia hoy izy:
Very kilao roa aho tao anatin'ny 15 andro fa navelako koa ny lafarinina sy vy. Ka io koa dia avy amin'ny ezaky ny hihinana tsara.
Valiny tamin'i Alejandra
Hashanty Guity Sandoval dia hoy izy:
Nanomboka naka azy aho tapa-bolana lasa izay ary hitako ny valiny talohan'ny naha-size ahy 8 ary izaho dia habe 6
Valiny ho an'i Hashanty Guity Sandoval
jorgelina dia hoy izy:
Entina mafana na mangatsiaka impiry isan'andro izy io dia manampy
Mamaly an'i jorgelina
TERAKA dia hoy izy:
nisy olona tena nanary lanja tamin'ity dite ity
Mamaly an'i nati
Nayelli dia hoy izy:
Salama, mahazatra ve ny miteraka fivalanana? Ary mbola alaina sa aato?
Valiny tamin'i Nayelli
Mluisa dia hoy izy:
Ara-dalàna ny fivalananan'ity i
Valiny tamin'i Mluisa
Mariana Carreon dia hoy izy:
Azo alaina ve rehefa manana atavy matavy ianao?
Valiny tamin'i Mariana Carreón
Karol Martinez dia hoy izy:
Ny ravina Bay dia maina na maintso
Valiny tamin'i Karol Martínez
LUZ JACQUELINE DIAZ DIAZ dia hoy izy:
Raisiko manomboka anio fa mandeha any amin'ny fandroana bebe kokoa aho, ny patalohako tsia
manery ahy izy ireo aorian'ny sakafo antoandro toy ny taloha fa mahatsapa tsara aho manantena ny hahavery tavy amin'ny kiboko izay no tadiaviko tsy dia be loatra fa miseho
Valio amin'i LUZ JACQUELINE DIAZ DIAZ
Josefa Carbonell Garcia dia hoy izy:
Mandra-pahoviana no azonao atao nefa tsy miala sasatra amin'ny fakana azy ary ohatrinona isan'andro?
Mamaly an'i josefa carbonell garcia
Ferre Sales Esperança dia hoy izy:
Maharitra hafiriana izy io? Manana tiroidid aho ary maka euthyrox,
Mamaly an'i Esperança Sales Ferre
Claudia dia hoy izy:
Salama, manana kista tsotra aho, mitady zazakely aho, ity no faharoa, 5 taona aho nefa tsy afaka bevohoka, nilaza tamiko ny gym fa very lanja aho, ny lanja 95: 400 dia afaka manampy ahy amin'ny maka ny dite indroa isan'andro
Valiny tamin'i Claudia
MIRACLES23 dia hoy izy:
Vao nanomboka nisotro kely aho ary nesorina ilay appetite na dia nanome ahy NAUSEA aza izy io, manantena aho fa ho vokany
Valiny amin'i MILAGROS23
Sakafo ara-pahasalamana telo mahasalama amin'ny laoniny
Raha mahatsiaro reraka mandritra ny fotoana ela ianao dia mety ho tratry ny havizanana adrenal